रौतहटमा युवतीको मृत्युपछि प्रेमीको घरमा शव फेला ! - आजकोNepal
रौतहटमा युवतीको मृत्युपछि प्रेमीको घरमा शव फेला !
संवाददाता २३ असोज २०७७, 3:00 am
२२ असोज, रौतहट । रौतहटमा बुधवार साँझ शंकास्पद मृत्यु भएको युवतीको प्रेम सम्बन्धका कारण ज्यान गएको खुलेको छ । युवतीको मृत्युपछि प्रहरीले उनका काका र काकीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।